Manohana ny orinasa, mpamatsy - Manohana ireo mpanamboatra i Sina
Fanohanana HDG Cast Iron Single Pipe Roller
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny volo HDG dia manohana ny fantsom-pandefasana fantsom-by iray dia natao hanakanana ny fantsom-panazavana izay ilana ny hetsika lavareny sy ny fanitsiana mitsangana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: Plain, Hot Dipped Galvanized, epoxy ary Green galvanized finish, hanomezana fahafaham-po ireo anticorrosion ambaratonga samihafa.
HDG Cast Iron Pipe Roller Stand
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana tena mifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny paompy fantsom-by vy HDG dia natao hametrahana fantsona fampiatoana izay ilaina ny hetsika lavareny sy ny fanitsiana mitsangana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: Plain, Hot Dipped Galvanized, epoxy ary Green galvanized finish, hanomezana fahafaham-po ireo anticorrosion ambaratonga samihafa.
Fampidinana entana avo lenta
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny fampidiran-tsoroka fanohanana vita amin'ny fingotra avo lenta dia ampidirina amin'ireo toerana manohana ny fantsom-pitrandrahana mba hisorohana ny fanorotoroana ny insulation. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra ny Afovoany Atsinanana sy Azia. Ary koa, 13mm, 19mm, 25mm, ary 50mm ny hateviny no misy.
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny ampinga fiarovana anay dia ampiasaina eo anelanelan'ny tampon-kaonty sy ny fantsom-pitrandrahana hisorohana ny fanorotoroana ny insulation. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra.
Fanohanan'ny lasely amin'ny U-bolt
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny fanohananay amin'ny lasely miaraka amin'ny U-bolt dia ny fanohanana milahatra izay tsy ilaina ny fanitsiana mitsangana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy, indrindra tany Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ankoatr'izay, U-bolt dia afaka manome fitoniana fanampiny.
Fanohanana Sodina azo ovaina
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny fanohananay fantsona azo ovaina dia ny fantsom-piraketana NPT atsofoka amin'ny lasely fantsom-boaloboka miaraka amina voanjo hidina fantsom-pamokarana NPT mamela ny fanitsiana mitsivalana amin'ny fantson-tsolika. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy, indrindra tany Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: efa vita mialoha, Zinc plated, epoxy ary Green vita amin'ny galvanized hamaly ny filan'ireo anticorrosion isan-karazany.
HDG Adjustable Cast Iron Roller Hanger
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana tena mifaninana indrindra amin'ny orinasa, ny HDG mihantona vy mihantona dia mihantona ho an'ny fampiatoana ny fantsona izay ilaina ny hetsika lavareny sy ny fanitsiana mitsangana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: plastika zinc, Hot Dipped Galvanized, epoxy ary Green galvanized finish, hanomezana fahafaham-po ireo anticorrosion ambaratonga samihafa.
HDG Cast Iron Pipe Roller seza
Amin'ny maha iray amin'ireo mpifaninana mpifaninana indrindra an'ny orinasa anay, ny seza fantsom-by vy HDG anay dia natao hampiatoana ny fantsona izay ilana fihetsiketsehana lavareny sy fanitsiana mitsangana. Ary nahazo laza malaza eran'izao tontolo izao izy ireo, indrindra any Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Moyen Orient ary Azia. Ary koa, misy fitsaboana isan-karazany amin'ny safidinao: plastika zinc, Hot Dipped Galvanized, epoxy ary Green galvanized finish, hanomezana fahafaham-po ireo anticorrosion ambaratonga samihafa.